1. Chipo Dzimwe nguva zvinouya muhurefu hwakareba kuti tivhiringidze pachivande izvozvo Ungaita sei humburumbira chipo kuputira? Nhasi tine nzira yekugadzira mufaro kubva pakuve mupi. Uye zadza iko kugutsikana kubva kune iye anogamuchira uyo akaona hunyanzvi uye hanya mune nhanho yega kubva pamufananidzo wekutanga kuputira munhu wese anogamuchira chipo mune ino yakakosha mutambo. Ona kunaka kwedu uye kutarisirwa Uyezve, kana wapedza, iwe unonzwa uchizvikudza zvakanyanya.
2. Midziyo yaishandiswa Cylinder chipo kuputira
3. - Kuputira chipo Sarudza kuenzanisa hunhu hwemugashiri. Uchishandisa akakodzera mavara uye mapatani Mune ino nguva inogona kunge ichitsvaga yakasikwa fiber pepa. Izvo zvinopa inodziya uye yakakosha manzwiro, hazvishamise Kana iri rakakura cylindrical bhokisi, bepa rakasarudzwa rinogona kunge rakakura. Kana kushandisa bepa kubva mumusanganiswa pamwe chete kuita kuputira kwakanaka - Uta kana ribhoni iro rinogona kuve nyore kuzviita kana kunamatira kune ruva rakaoma rakanaka kune rimwe. - chigero chinoshandiswa kucheka bepa, cheka ribhoni uta. - Transparent tepi glue uye maviri-mativi ekunamatira - Cylinder bhokisi Unogona kuipfeka nechipo muhukuru hwakakodzera. Kana kuti yakati rebei Kana chiri chipo chebhokisi chinoshandiswa kushongedza nzvimbo yacho Wobva wasarudza saizi yakaiswa uye wotaridzika
4. Matanho uye kuputira chipo chesilinda.
5. - Tanga kubva pakuyera bepa rakakomberedza humburumbira bhokisi kuti rikwane. Mativi ese akapamhama uye akareba - - Peta kumusoro uye pasi zvakaenzana - Chengetedza magumo epepa netepi inonamira yakanamirwa pabhokisi kudivi. Uye yakanamirwa pamativi maviri kune rimwe divi kuitira kuti pasave nechaonekwa. - Svika kumusoro kwepamusoro Dhonza magumo epepa pasi Uye yakagadziriswa neakajeka tepi .. - Edza kukumbira pakona chaipo Uye shandisa yakajeka tepi nguva nenguva kuti uchengete iwo maratidziro atinobata pamusoro Ita kudzingirira kusvika kumagumo kwedenderedzwa. Uye ita mativi ese
6. - Cheka bepa rive denderedzwa worinamatira pamusoro.
7. - Isa ribhoni kumusoro zvakanaka - zvaitwa. Tarisa wapedza uye waendesa
8. Izvo hazvina kuomera Maitiro ekuputira humbwe chipo Uye zvakare inogona kupa iye anogamuchira imwe tariro Chimiro chebhokisi chinotaridzika seichi. Chii chauchawana sechipo? Uye pakupera kwegore Cylinder chipo bhokisi inogona kurongwa. Sekushongedza imba kana kona yeKisimusi Kuti uwane zvimiro zvemaonero zvemhando dzakasiyana Wedzera runako uye mufaro zvakare, nyore uye kwete kuoma.
9. Kuita chimwe chinhu nerudo uye chinangwa Mhedzisiro yacho inogara iri yakanaka, koka vana vako kuti vabatane pamwe chete muchiitiko chekuputira zvipo kune vaunoda. Kunyangwe hunyanzvi husinga bude hwakanyanya kunaka Asi rudo nehanya Icho chiitiko chinonakidza mumhuri. Chimwe chiitiko chinodziya chaunoda iwe kuti uedze !!